Daawo Sawirada Xildhibaano ka baxsaday Weerarkii xarunta Golaha Shacabka oo Madaxtooyada Socod ku galaya
Xildhibaanada Baaramaanka Soomaaliya ee manta soo xaadiray fadhigii ay kulahaayeen Xaunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa marqura ku kala cararay xaruntaasi, kadib markii kooxo katirsan Al-Shabaab xaruntaasi kusoo weerareen qaraxyo iyo Weerar toos ah.
War Dag Dag ah:Baarlamaanka Soomaaliya oo manta Codka Kalsoonida u qaaday Wasiirka Arimaha Gudaha Xukuumada Soomaaliya
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood kadib waxa ay maanta Codka Kalsoonida u qaadeen Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre, oo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Mooshin ka keeneen.
Baarlamaanka Soomaaliya oo dib ugu celiyay Xukuumada heshiiskii Shirkada Favori ee muranka dhaliyay
Wasiir Goodax oo maalintii Labaad Su’aalo weydiinayaan Baarlamaanka
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Somaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa waxa maalintii labaad xildhibaanada baarlamaanka ay weydiinayaan su’aalo kala duwan.
Gudiga Amniga iyo Arrimaha Gudaha Baarlamaanka oo dalbaday in la sugo ammaanka Xildhibaanada
Baarlamaanka Somalia oo u codeeyay joojinta Qaadashada Kaararka Aqoonsiga
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod gacan-taag ah ku diiday in qaadashada baasaboorka Somaliga lagu xiro warqadaha aqoonsiga muwaadinnimo, kaddib markii xildhibaannada intooda badan ay sheegeen in dadku ay dhibaato ka maraan qaadashada warqadaha aqoonsiga.
Barlamaanka somaaliya oo Maanta ka dooday magacaabista maamullada degmooyinka ee Gobollada dalka & Xildhibaan Xidig oo kadhex Muuqday
Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga doodeen magacaabista maamullada degmooyinka ee gobollada Dalka iyo sharcigii ay horey Baarlamaanku u ansxiyeen ee la xiriiray nidaamka iyo shuruucda maamul u sameynta gobollada Dalka.
Baarlamaanka oo laalay heshiis shirkad Turki ah loogu wareejiyay Maamulka Dekeda Muqdisho
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaraar cad ka qaatay heshiis Xukuumadii Saacid la gashay shirkad laga leeyahay Turkiga oo lagu wareejinayo Maamulka Dekeda, iyadoo baarlamaanka gebi ahaanba heshiiskaas laalay, kuna dalbaday in muddo 30-cisho gudahood lagu hor-keeno heshiiskaas.
Baarlmaanka oo Xukuumada ka dalbaday in Miisaaniyada dawlada lagu saleeyo Shillin Somali
Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya mudane Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si kulul uga hadlay miisaaniyada kusaleysan Dollarka ee Baarlamaanka la hor keenay soona diyaarisay Xukuumada gaar ahaan wasaarada Maaliyada.
Wasiiradii Hore ee Arimaha Dibada Soomaaliya oo maanta ka mid noqotay Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia
Wasiiradii hore ee Arimaha Dibada Soomaaliya Foysiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa Maanta si rasmi ah uga mid noqotay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii loo dhaariyay xilkaasi.
War Deg Deg Ah Baarlamaanka oo goordhaw Codka Kalsoonida u qaadaya Xukuumada Ra'izul Wasaare Cabdi Wali
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhaw la filayaa in Codka Kalsoonida u qaadaan Xukuumada uu dhawaan soo Dhisay Ra'izul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed oo maanta la horgeeyay Baarlamaanka.
Qorshaha xukuumadda cusub oo maanta Baarlamaanka loosoo gudbinayo
Waxaa maanta Golaha Baarlamaanka ee Soomaaliya la horkeeni doonaa barnaamijka siyaasadeed iyo qorshaha ay ku shaqeyn doonto xukuumadda cusub ee uu dhowaanta soo dhisay ra’iisul wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Xildhibaanada Barlamaanka oo Maanta Soo Gaba-Gabaynaya Mooshin kadhan ah Wasiiradii Shirdoon
Barlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeynaya mooshin ka dhan ahaa wasiirada xukuumadii hore ee C/Faarax Shirdoon Saacid kaas oo ay soo gudbiyeen qaar kamid ah xildhibaanada barlamaanka.
Xildhibaannada Baarlamaanka Somalia ayaa lagu wadaa inay maanta cod u qaadaan mooshin lagu diiddan yahay in wasiirradii xukuumaddii hore ay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee la soo dhisayo.